2019 #NABShow 4K 4Charity ပျော်စရာ Run ကို! NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
Home » အသားပေး » 2019 #NABShow 4K 4Charity ပျော်စရာ Run ကို!
2019 #NABShow 4K 4Charity ပျော်စရာ Run ကို!
အဆိုပါ 4K 4Chariy ပျော်စရာ Run ကို အဆိုပါ 2019 မှာအများဆုံး "ဟုရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထား" ကွန်ယက်ဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနေသည် #NABShow ။ တစ်ချိန်တည်းမှာချွေးများနှင့် networking, ကြီးစွာသောအကြောင်းမရှိထောက်ပံ့စဉ် 2.49 မှာနေဝင်ချိန်ပန်းခြံတဝိုက်ထပ်ခါတလဲလဲဒီ 7-မိုင်ပြေးအတွက်တော်တော်များများအဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်: အင်္ဂါနေ့တွင် 30AM, ဧပြီ9။ အဆိုပါ 100% အခွန်နှုတ်ယူပြီးမှတ်ပုံတင်ကြေးကိုအဘယ်သူ Code ကိုမိန်းကလေးများအကျိုး။
မိန်းကလေးများအဘယ်သူသည် Code ကို ကွန်ပျူတာနည်းပညာဆိုင်ရာသိပ္ပံ field ရဲ့ဒေသများအတွက်ကျားမကွာဟချက်ပိတ်ဖို့ရန်အားထုတ်မှုကိုဦးဆောင်နေသည်။ အမှန်တကယ်အားဤအံ့သြဖွယ်အယူအဆခြောက်လလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်ခဲ့ပြီးအားလုံး 90,000 ပြည်နယ်များအတွက် 50 မိန်းကလေးငယ်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမိမိတို့၏ကောလိပ်-အသက်ကျောင်းသားဟောင်းများအားလုံးကွန်ပျူတာသိပ္ပံပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွက် 15 ကြိမ်အတွက်အမျိုးသားရေးပျမ်းမျှအား majored ပါပြီ။ အမေရိကန်စီးပွားရေးကို၌ဤအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာသိမ်းပိုက်ယခုနှစ် 2026 အားဖြင့်ထက်ဝက်သန်းအားဖြင့်ကြီးထွားရန်မျှော်လင့်နေပါသည်! Code ကိုနည်းပညာအတွက်ကျားမကွာဟချက်ကိုပိတ်ဖို့ကိုကူညီ K-12 မိန်းကလေးများကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက်ဖွစျလိမျ့မညျကိုအဘယ်သူမိန်းကလေးများများအတွက်ခြုံငုံပဏာမ။ သူတို့အနေနဲ့အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်ထံမှညွှန်ကြားချက်မှထိတွေ့မှုမခံမယူကြပါလျှင်လေ့လာရေးတိုင်းပြည်အနှံ့အများအပြားပြည်နယ်များအထက်တန်းကျောင်းများတွင် ပို. ပို. ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတန်းစတင်ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်, အတန်းထဲတွင်တစ်ဦးအကျိုးစီးပွားဖေါ်ပြခြင်းအလွန်များမိန်းကလေးငယ်များရှိနေကြသည်မဟုတ်။ Code ကိုမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုအမျိုးသမီးများကဝိုင်းရံနေလျှင်သူတို့တစ်တွေအထီးကြီးစိုးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်း၏အတားအဆီးများကိုကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မည်အကြောင်း, အယူအဆကိုပံ့ပိုးသောသုတေသနအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသည်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးများ။
Viva Vegas မှာနေစဉ်၌သင်တို့၏လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်ရရန်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့။ တစ်အံ့သြစရာအကြောင်းမရှိယနေ့မှတ်ပုံတင်မယ်!
4K 4Charity ပျော်စရာ Run ကို: အဆိုပါ 4K 4Charity ပျော်စရာ Run ကိုပု4နှင့် တွဲဖက်. ကျင်းပမယ့် 2.49km (2019-မိုင်) ပြေးခြင်းနှင့်လမ်းလျှောက်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည် NAB ပြရန် Las Vegas မှာ။ မတူကွဲပြားမှုများနှင့်ပါဝင်အစပျိုးဘို့အများကြီးလိုအပျသောရန်ပုံငွေပြုစုပျိုးထောင်စဉ်ဤမူထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်, ပြပွဲတက်ရောက်ရိုးရာကွန်ရက်မှကျန်းမာအခြားရွေးချယ်စရာပေးထားပါတယ်။9နံနက်နှင့်န်းကျင်လှပသောနေဝင်ချိန်ပန်းခြံ loops: အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို7မှာဧပြီလ 30, အင်္ဂါနေ့တွင်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကြေး 100% အခွန်နှုတ်ယူပြီးသားသည်နှင့်တိုက်ရိုက်အကျိုးပြု မိန်းကလေးများအဘယ်သူသည် Code ကို.
ထွက်လက်လွတ်ယခုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော sign up ကိုမထားပါနဲ့!
Code ကိုနည်းပညာအတွက်ကျားမကွာဟချက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးပရိုဂရမ်မာတူနဲ့ဘာလုပျသလဲ၏ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည့်နိုင်ငံတကာ non-profit အဖွဲ့အစည်းကိုကားအဘယ်သူမိန်းကလေးများ။ သူတို့ရဲ့ 7-ရက်သတ္တပတ်နွေရာသီ immersive အစီအစဉ်တစ်ခု 2-ရက်သတ္တပတ်အထူးပြုကျောင်းပရဝုဏ်အစီအစဉ်, ကျောင်းဒုတ်ပြီးနောက်, ကောလိပ် loop အစီအစဉ်နှင့် New York Times ကိုရောင်းအားအကောင်းဆုံးစီးရီးနှင့်အတူ, သူတို့က, လာအောင်နှိုးဆွပညာပေး, နှင့်ကွန်ပျူတာနှင့်အတူအမျိုးသမီးငယ်တပ်ဆင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေကြ 21st ရာစုအခွင့်အလမ်းများကိုလိုက်ရန်ကျွမ်းကျင်မှု။ Code ကိုယနေ့အထိ 90,000 မိန်းကလေးငယ်များရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကမိန်းကလေးများ။ လှုပ်ရှားမှု join သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို, အလည်အပတ်ခရီးသင်ယူဖို့ girlswhocode.com.
အေျကာင္းအရာ NAB ပြရန်
NAB ပြရန်, ကျင်းပဧပြီလ 6th-11th, Las Vegas မှာ 2019, ဖန်တီး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အားလုံးပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာပေးပို့ဖုံးအုပ်ထားသည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ 103,000 နိုင်ငံများနှင့် 166 + ပြသခဲ့သည်ထံမှ 1,700 တက်ရောက်နှင့်အတူ, NAB ပြရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အဆုံးစွန်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်း မှစ. စားသုံးမှုရန်, မျိုးစုံပလက်ဖောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောလူမျိုးများကိုဖြတ်ပြီး, #NABShow 2019 ရိုးရာအသံလွှင့်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအသစ်ဖန်သားပြင်မှအကြောင်းအရာများပေးပို့လက်ခံသောဖြေရှင်းချက်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။
လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံးအမေရိကတိုက်ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ထောက်ခံအားပေးမှုအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ NAB, ဥပဒေပြုစည်းမျဉ်းများနှင့်အများပြည်သူရေးရာများတွင်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကျိုးစီးပွားလာပြီ။ ထောက်ခံအားပေးမှု, ပညာရေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတဆင့် NAB အကောင်းဆုံး, ၎င်းတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအစေခံကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်၌အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများသိမ်းယူဖို့ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါတယ်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ www.nab.org.
ထုတ်လွှင့်ဘိသည့် 2019 ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် Las Vegas မှနှင့်များ၏ထုတ်လုပ်သူအတွက် NAB ပြရန် LIVE ။
Bridgid Harchick အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
2019 #NABShow 4K 4Charity ပျော်စရာ Run ကို! - မတ်လ 20, 2019
2019 #NABShow: #GALSNGEAR လက်ရှိ NAB ဇယား! - မတ်လ 11, 2019
ဂရေဟမ် Media Group သို့အတူဝါရှင်တန်ပို့စ်ရဲ့ Arc ထုတ်ဝေရေးလက္ခဏာများ - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2019
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-03-20
ယခင်: NAB 360 မှာပူးပေါင်းအားကစားအသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်းတင်ပြ FingerWorks နှင့်လက်သစ် 2019
နောက်တစ်ခု: Miller က NAB 2019 မှာနယူးကုန်ပစ္စည်း lineup တင်ပြ